China IP66 Ihe mkpuchi mkpuchi ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Feilifu
• IP66 gosiri mgbe eji ya.
• Na-enye ike ịhazi onwe ya iji dabaa ngwa ahụ.
• Nabata 86x86mm, 86x146mm switch & socket, Nakwa MCB, SPD ma ọ bụ din okporo ụzọ kọntaktị.
• Direct fix mgba ọkụ & anya n'ime, ọ dịghị mkpa wepu Herọd mkpuchi.
• A na-ahazi agba mkpuchi.
Ihe Nlereanya Nhazi nhazi
Ogwe njikwa kuki
86 * 86 S / anya
86 × 146 RCD + anya
86 * 146 oghere abụọ
Enwere ike ịgbanye ma ọ bụ dochie ndị na-agbanwe ihe na-enweghị oghere imeghe igbe na-enweghị mmiri. Ofu panel ịghasa ala na-enye ụzọ imewe, nwere ike na-stalled na mba dị iche iche na leakage ọkọlọtọ anya, (pụrụ iche nkọwa imewe)
Mba niile nwere ike imechi mkpuchi mgbe njikọ plọg ahụ, nchedo nchekwa ka ntụkwasị obi.
Enwere ike gbanye ogwe ọkụ na ihu n'ihu na-enweghị ike imeghe igbe na-enweghị mmiri. N'otu oge ahụ, imewe ahụ nwere ike ịwụnye obere mgbatị sekit, ntolite ma na-eduzi kọntaktị okporo ígwè na-akwado ngwaọrụ nrụnye. Enwere ike iji otu ma ọ bụ abụọ 86 dochie otu ngwaahịa ahụ dịka ihe ndị achọrọ, iji gboo mkpa nke ndị ọrụ.
Nke gara aga: TM-502S Junction igbe
Osote: IP55 Series Waterproof Mkpa Gbanye